Fifanandrinana nahery vaika tamin’ny dahalo : zandarin’ny Usad iray maty, roa hafa naratra voatifitra | NewsMada
Fifanandrinana nahery vaika tamin’ny dahalo : zandarin’ny Usad iray maty, roa hafa naratra voatifitra
Zandary iray avy ao amin’ny Unité special anti-dahalo (Usad) no namoy ny ainy, roa hafa kosa naratra voatifitra, nandritra ny fifanandrinana nahery vaika tamin’ny andian-dahalo, efa ho 100 lahy, tao amin’ny kaominina Volambita, distrikan’Iakora, omaly maraina.
Namoy ny ainy nandritra ny fifandonana tamin’ny dahalo miisa 100 tany Vavosy Iakora, omaly tamin’ny 9 ora maraina, ny zandary GP2C Rakotondraparany, miasa ao amin’ny Escapara Ivato. Zandary avy amin’ny vondron-kery manokana hiady amin’ny dahalo (Usad) ity namoy ny ainy ity. Zandary roa hafa kosa naratra voatifitry ny dahalo teo amin’ny feny sy ny tongony. Dahalo miisa 20 kosa indray maty voatifitra raha omby miisa 10 tafaverina amin’ireo omby miisa 60 lasan’ireo dahalo.
Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, nitrangana halatra omby tao Volambita distrikan’Iakora, omaly tamin’ny 4 ora maraina. Dahalo miisa 100 no tompon’antoka tamin’izany. Omby miisa 60 niaraka tamin’ny takalonaina roa ka zaza ny iray lasan’ireo malaso. Nanara-dia avy hatrany ireo zandary avy ao amin’ny vondron-tobim-paritra Ihosy nampian’ireo miaramilan’ny Usad. Raikitra ny fifandonana tamin’ny 9 ora sy sasany tao amin’ny tanàna atao hoe Vavosy, fokontanin’i Volambita, distrikan’Iakora faritra Ihorombe. Toerana manelanelana distrika telo (Betroka, Iakora, Midongy Atsimo) ity nitrangan’ny fanafihana ity. Voalaza fa tena henjana ny fifampitifirana satria manana fitaovam-piadiana mahery vaika koa ireo dahalo. Tamin’izany no nahafaty ilay zandary miasa ao amin’ny Escapara Ivato. Nalefa notsaboina ao amin’ny hopitaly Volambita kosa ireo zandary roa lahy voatifitr’ireo dahalo.
Nidina tany an-toerana avy hatrany ny kaomandin’ny FIGN, ny Jly Ramiandrisoa Jean de Dieu sy ny kaomandin’ny fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena ao Toliara, ny Jly Ramananjatovo Alphonse izay nanamafy fa hisy ny fanamafisana ny hetsika iadiana amin’ny asan-dahalo any amin’ireo faritra mena. Hisy zandary fanampiny kosa alefa hanampy tosika ireo any Iakora.
Olona fito koa maty voatifitry ny dahalo tany Tsiroanomandidy
Fa nitrangana fanafihan-dahalo miisa 80 lahy nirongo basy Kalachnikov telo sy basim-borona tao Ambaravaranala Tsiroanomandidy, omaly maraina tamin’ny 5 ora. Vokany, olona miisa fito maty voatifitry ny dahalo. Omby miisa 600 lasan’ireto dahalo ireto. Voalazan’ny loharanom-baovao avy any an-toerana fa misy Poste Avancé ao an-toerana fa tsy afa-manoatra ny zandary. Ireo dahalo indray aza no mihantsy ary miandry ireo zandary hanampy tosika avy any Tsiroanomandidy. Tsy vitan’izay, fa mbola novakin’izy ireo koa ny fiangonana iray ao Ambaravaranala ka nanao izay danin’ny kibony ireto malaso ireto.
Tena efa fihantsiana mihitsy ny ataon’ny dahalo amin’izao fotoana izao. Tsy afa-manoatra anefa ny mpitandro filaminana manoloana ny fitaovam-piadiana mahery vaika eny am-pelatanan’izy ireo. Isan’ny mampanano sarotra ireo mpitandro filaminana ny fahasarotan’ny lalana. Voafehin’ny dahalo rahateo iny faritra atsimo iny. Tokony hampiana ny fitaovam-piadian’ireo mpitandro filaminana hoenti-miatrika amin’ny asan-dahalo.